Icciitii 4kiloo dhaa miliqxee baate!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIcciitii 4kiloo dhaa miliqxee baate!!
Icciitii 4kiloo dhaa miliqxee baate
Icciitichi Injifannoo TPLFn kan walqabtuudha. Kunis:-
1. TPLF akkamitti injifatuu dandeessee?
2. Ameerikaan maaliif cichitee Tigiraayiin gargaartii?
3. Geetaachoon Assaffaa lubbuun jiraachuu fi Ameerikaa wajjiin
Injifannoon Magaalaa Maqalee darbee kutaa naannoo Amaaraatuu akka qabattu godheef Geetachoo Assaffaa jiraachuu isaa akka ta’e dubbatama. Kana ta’uu Abiy tolchee beeka. Geetaachoon Asaffaa Maal Goodhee?????
Geetaachoo Asaffaa Jechuun, Basaasaa Ol’aanaa Ameerikaa, Xoophiyaa keessatti argamu keessa isa tokko dha. Inni fi K/Abiyis Miseensa INSA ta’uu darbee hiriyoota waliin akka ta’etuu himama.
Ameerikaan har’a cichitee Tigiraayiin kan gargaaraa jirtuuf, xiyyeeffannaa guddaas kan godhaartuuf, dippiloomaasii cimaa Geetachoo Asaffaa waliin waan qabduuf. K/Abiyi gaafa woraana Tigiraayi irratti duulchisu Geetachoon haafuura dhoffannaan waan du’eeru se’eeti. Garuu jiraachuu Geetachoo Asaffaa gaafa dhagayu, ofiduuba deebi’ee kijibuu itti fuufe. Ganuu fi kijibuun kan beekkaman K/Abiy Ahmed, “karaan sobaan darban gala nama dhiba” kan jedhan ta’eera.
Namni yaadatu yoo jiraate hayyuun siyaasaa Jaawaar Mohamed Geetaachoo Asaffaa akka seeraaf dhihaatu K/Abiy Ahmed gaafachaa tureera. Abiy Ahmed Geetachoo wajjiin hiriyyaa waan turaniif, gaafii Jaawaar raasatti dhiisee isaayyuu diina godhatee adamsaa ture.
Waan hundaanuu Abiy Ahmed Ali ‘’ The war Criminal of 21st Century” ta’ee gaafatamuun isaa hin hafu. Angawaan Bilxiginnaa icciitii tana karaa keessaan nuuf dabarse akka jedhutti, TPLF Finfinnee galuun kan citee, maal nuuf woyyaa? jedhanii erga mari’atanii, Abiyyii, Dammaqe fi agawoonni gugurdoon isaanii balali’uuf luka takkattitti galanii jiran jedha. Garuu hanga amma biyya kamiif akka balali’uuf ta’an wanti beekkame hin jiru. Buqqaatee, haa yaatuu faanti isaanii asi hin deebi’in!!
Odeeffanna kana irraa oromoon, WBO jabeeffatee, qabsoo itti jiru kana hoggansa tokkoon hogganamee, bu’aa Bilisummaa harkatti deeffachuu qaba. Haqa qabna!!, dhugaas qabna!!, ni bilisoomna!!!
Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate! Walgahii dhoksaan mana maree nageenyaaa masaraatti kaleessaa jalqabee hanga ganama…
Oduun miliqxee baate takka akkas jetti. Obbo Abiyyi mana Dr.Lammaa Magarsaa dhaqee Dr.Lammaa akkas jedhee…
Oduu Miliqxee baate: Oduun Gara Masaraa Motummaa Dr.Abiy irraa dhufte akka ibsituutti Waltajjii dhooksaa…